Ny fitaterana fuse dia misy lavaka misambotra. bokotra fanindriana, tabilao mpiambina ary tahony. Misy toerana telo ho an'ireo lavaka misambotra. ho an'ny fijanonana NH000-NH00, NH0-NH3, ary NH4.
Ireto misy ampahany ireto: 1. Mpanafika mitsonika, 2. Switch micro (miaraka amina fifandraisana akaiky mahazatra sy fifandraisana iray misokatra mahazatra), 3. Toerana iray ho an'ny mpikomy sy ilay switch. Fitaovana fanaraha-maso fuse matetika dia ampitovina eo ambanin'ny vodi-tadivavarana mifatotra amin'ny faran'ny fuse. Rehefa tapaka ny fijaliana dia mipoitra avy ao amin'ilay mpikapoka ny pin mitokona, nanosika ny microswitch ary nanambara ny signal nalefa na notapahina ny circuit. Avy eo ny elanelana misy eo amin'ny tendrony roa mifatotra dia azo ahitsy amina ambaratonga iray ho an'ny fampitoviana amin'ny fuse amin'ny haavo samy hafa.